कैलाशको कुटी: एक दिनको हाईकिङ र 'काकाकोला'को रमाइलो
Posted by कैलाश at 3:16 PM
ओहो ! यस्तो यात्रा भने पछि मनै फुरुङ्ग हुन्छ त्यस मा अझ रमाइलो हुनुपर्छ ! अरु के चाहिनु र ?
काकाकोला चाहि भट्टीवाल्नी को पाठशालाबाट लानु भएको थियो -जस्तो लाग्यो नि ? तपाई को कुरा सुन्दा त !
तर मलाई त त्यो भन्दा गुन्द्रुक को अचार नै ठीक लाग्छ - तपाइले कुरो उठाउदा - जिब्रोमा रसनै झरला जस्तो भयो ।
नमोबुद्धको दृर्श्य मैले Manu जी को ब्लगमा हेरेको थिए । राम्रो नै रहेछ ।
खासै टाढा नभए पनि यि ठाँउहरुमा जान कहिल्यै मिलको छैन र पुग्न पाएको छैन । तपाईको यात्रा विबरण पढेरै आफू पनि त्यहि थीएँ भन्ने सोचेँ मैले पनि ।
साँच्चै नयाँ पत्रिकाको अनलाईन संस्करणमा त तपाईको फोटो पनि देखै जस्तो लाग्छ हैन ? ।
अनि यो काकाकोला तपाईहरुमाझ त पुरानो भैसकेको रहेछ, आफूले त बल्ल आजै हो सुनेको नाम।
होइन हौ!! यो काकाकोला भन्ने नाम चहि कुन चिजको परेछ हौ!ठम्याउनै गार्हो भयो मलाई त!जे होस यात्रा रमाईलै भएछ।आफु नपुगे पनि पुगे जस्तै लाग्यो।मलाई पनि!!!!!
काकाकोलाको महत्व चैं त्यो यात्रामा अलि भव्यनै भएजस्तो , हत्तेरिका म किन त्याँहा रहेनछु जस्तो लाग्यो है । त्यो राष्ट्रब्यापि तहल्का मचाउने गुन्द्रुकको अचार झन कस्तो मिठो भा'थ्यो होला ? कुरा सुन्दामा नै जिब्रो रसाउने ; हैन के हालेर साँधेथ्यौ भन भन रमिता ? भन्नुजस्तो क्या ।
रमाइलो यात्रा संस्मरणको लागि धन्यबाद! मनुजीको ब्लग र कान्तिपुरमा खगेन्द्र संग्रौलाको लेखबाट पनि अलि अलि जानकारी पाइएको थियो।
पोस्ट रोचक लाग्यो। कान्तिपुरमा खगेन्द्रजीले किन ग्लानी व्यक्त गर्नु भयो भन्ने कुराको अझ बिस्तारमा जानकारी पाइयो
oho sarai ramro lekh lagyo...thanks for sharing it..
कैलाशजीको यात्रा संस्मरण निकै अर्थिलो पारामा पढे । अति रोमान्चित भएको पाए । धन्यबाद
la gajabko yaatra bhaechha khusi lagyo, kailash bahini kahile kahi ktm bhanda bahira ko koseli pani paskanuhos hai.
धेरै रमाईलो यात्रा र यात्राको बर्णन पनि !!
हा हा हा हो नि बेदनाथजी भट्टीवाल्नीकै देन हो। कोकाकोलालाई काकाकोला बनाउने जिनिस अरु कहाँबाट बोक्नु त। अनि दीलिपजी यो काकाकोला पुरानो भएर पुनः न्वारन पनि भइसकेको छ अहिले त। तर त्यो चाहि अर्को पाली मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ला हगि? अनि नयाँ पत्रिकामा भएको फोटो चाहि ठिकै देख्नुभयो भन्नुपर्ला।
संगमजी नाम जे सुकैभएनि तपाई हामीमाझ एकदमै चीरपरिचित, अझ भनौ न लोकप्रिय 'जिनिस' भन्ने बुझे हुन्छ नि। दीपकजी काकाकोलाको महत्व त थियो नि त्यहाँ। अनि गुन्द्रुकको अचार त साह्रै मिठो थियो। त्यसको जोडा मकै भटमास पनि थियो नि हौ। अनि गुन्द्रुक चाहि नि दीपकजी, तपाईले 'के के हालेर साँध्यौ रमिता' भनेजस्तै म चाहि 'फेरी साँधेर ल्याउन न रमिता' भन्नुजस्तो नि हौ।
अनि बसन्तजी र सुमीरनजीले त खगेन्द्र दाईको लेख पढेरै पनि धेरै जानकारी लिइसक्नुभएको रहेछ। त्यही भएपनि पुन मेरो गन्थन पढेर प्रतिक्रिया दिनुभो। खुशी लाग्यो। सिकारुजीको कुरा मैले स्पष्ट बुझिन। अर्थिलो पाराले भनेको मतलब के होला कुन्नी। अर्थ लगाई लगाई भन्नुभाको हो कि भन्ने अनुमान लगाए मैले त। बिजे दाजु, यसो सकेसम्म त कुटीमा राखु भन्ने नै मन हुन्छ नि। मिलेसम्म राखुला नि। प्रीतमजीलाई पनि happy blogging । उजेलीजी यात्रा रमाइलो भएर वर्णन पनि रमाइलो भएको होला नि हगि?
मुख्य कुरो, अन्तमा सबै सबैलाई धन्यवाद।